Madaxweynihii hore ee Somalia Sharif Sheikh Axmed oo gaarey Jaamacada Boston ee Gobolka Massachusets, – idalenews.com
Madaxweynihii hore ee Somalia Sharif Sheikh Axmed oo gaarey Jaamacada Boston ee Gobolka Massachusets,
Madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa u dhoofay dalka Mareykanka, halkaasoo uu ku diyaarin doono darajada Master-ka, kadib markii uu casuumaad ka helay Jaamacada magaalada Boston.
Sida ay sheegayaan wararka Madaxweyne Shariif ayaa casharo ka bixin doona Jaamacada Boston ee Gobolka Massachusetts.
Ilo wareedyo ku dhow dhow Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegaya in casharada uu ka jeedin doono ay ka mid tahay mudadii uu siyaasada ku jiray Maxkamadihii islaamiga ilaa markii uu Madaxweynaha Soomaaliya loo doortay sanadkii 2009-kii.
Madaxweyne Shariif ayaa waxaa shalay garoonka diyaaradaha Kampala ku sagootiyay Wasiirka Gaashaandhiga C/xakiin Fiqi oo booqasho ku jooga, Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Uganda iyo Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaas Sayid Axmed.
Waxaa la sheegay inuu noqonayo Madaxweynaha afaraad ee lagu casuumo Jaamacada Boston, kuwaasoo Madaxweynayaal hore oo si dimoqraadi xilkooda u wareejiyay, kadib doorasho looga guuleystay.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa raacay mid ka mid ah qoysaskiisa oo kula sugnaan doona dalka Mareykanka mudada uu joogi doono ee ku siman casuumaada, iyadoo uu dib dalka ugu soo laaban doono.
Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ayaa dowladda Uganda ka helay casuumaad rasmi ah, iyadoo deegaan ka siisay magaalada Kampala, kadib markii uu ka guuray magaalada Muqdisho bishii November ee sanadkii hore uu ka guuray magaalada Muqdisho.
Madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa bishii September looga guuleystay doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho, iyadoo uu noqday Madaxweynihii ugu dambeeyay ee Dowladihii KMG ahaa ee isaga kala dambeeyay Soomaaliya.
Wasiirka Difaaca oo ka warbixiyey Wareerkii lagu soo furan lahaa La haysta Fransiiska oo Buulo Mareey ka dhacey